“Sawirro”Madaxweynaha Soomaaliya oo waraaqaha aqoonsiga safiirnimo ka gudoomay danjiraha Koonfurta Kuuriya ee Soomaaliya. | shabakada banaadir24 online
shabakada banaadir24 online
“Sawirro”Madaxweynaha Soomaaliya oo waraaqaha aqoonsiga safiirnimo ka gudoomay danjiraha Koonfurta Kuuriya ee Soomaaliya.
banaadir24 news Madaxweynaha Soomaaliya mudane Xassan Shiikh Maxamuud ayaa maanta Amasadoor kim Chan woo oo ah safiirka cusub ee dalka Koofurta Kuuriya u fadhin Doona Soomaaliya ka gudoomay waraaqaha danjiranimo kadib markii uu Barqanimadii maanta xarunta madaxtooyada yimid halkaasi oo uu ku qaabilay Madaxweynaha jamhuuriyada Soomaaliya kadibna waxa ay yeesheen kulan la’isku dhaafsaday xiriirka labada dal u dhexeeya iyo sidii loosii dardargalinlahaa Ambasadoor kim chan woo ayaana waraaqiihiisa safiirnimo u dhiibay Madaxweyne Xassan Shiikh Maxamuud isagoo ka gudoomay una muujiyay sida ay Dku kuwlada Soomaaliya ula shaqeyn doonto
Wasiir kuxigeenka arimaha dibada Jamaal Maxamed Barow oo saxaafada lahadlay Ayaa sheegay in kuuriyada Koonfureed laba iyo labaatansano kadib ay soo celisay Xiriirkii ay la laheyd Soomaaliya.
Amasadoor kim chan woo oo isna dhankiisa hadlay ayaa sheegay in koofurta Kuuriya ay safaaradeeda ka furi doona magaalada Muqdisho Soomaaliya iyo Koofur Kuuriyana u xiiir wanaagsan ka dhaxeeyo isagoo intaa ku daray iney gacan Ka geysan doonaan dib u dhiska dalkeena.
Mudooyinkii danbe waxaa sii kordhayay wadamada safaaradahooda ka furanaya Soomaaliya waxaa sidoo kale garab socday dib ugu laabashada Soomaaliya Kuraastii ay caalamka kulaheyd iyadoo arimahani oo dhan ay ku yimaadeen Horumar dowlada Soomaaliya ay ka sameysay dhinaca dibada hase ahaatee Dowlada waxaa looga fadhiyaa inay isbedel muuqda ka dhaliso gudaha dalka.
« DAAWO SAWIRADA:- Wasiirka gaashaandhiga Xarumihii uu tagay iyo Madaxdii uu la kulmay intii uu Sudan joogay oo dhamaystiran. Shirkii guud ee Madaxda midowga afrika oo ka furmaya adis ababa. »
Categories : KEYDKA SAWIRADA
Ciidamada Booliiska ee degmada Cabudwaaq oo gacanta ku dhigay gacan ku dhiiglayaal
Munaasabad dib loogu howl galinayo wakaladaha howlaha marakiibta iyo gaadiidka badda iyo wakaalada dekadaha soomaaliyeed ayaa waxaa maanta lagu qabtay muqdisho.
salaadiin,ugaasyo,waxgarad,iyo nabadoono Soo Dhaweeyay qodobadii ka soo baxay shirkii urur goboleedka IGAD.
Shirkii guud ee Madaxda midowga afrika oo ka furmaya adis ababa.